Ivan Perisic Childhood Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu site LifeBogger
Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Croatian Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye kasị mara aha; "nne okuko". Anyị Ivan Perisic Child Story plus Na-adịghị mma Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe ngosi ya na-egbukepụ egbukepụ dị ka onye na-egbu anụ ma ọ bụ onye na-egbu ya. Otú ọ dị, naanị mmadụ ole na ole na-atụle Ivan Perisic's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Ivan Perisic na 2nd ụbọchị February, 1989 nne ya, Tihana Perišić na nna Ante Perisic na Split, Croatia.
Ivan Perisic sitere na ezinụlọ ugbo. N'ịbụ onye na nne na nna ya, Ivan toro na nwanne ya nwanyị, bụ Anita Perisic. N'ala mgbe ọ bụ nwata, ndị enyi ya na-akpọ ya Koka nke pụtara n'ụzọ nkịtị "Hen" n'asụsụ ya. "nne okuko"Aha ọjọọ ahụ bịara bụrụ eziokwu n'ihi na a na-ahụkarị nwata Ivan inyere aka na nna ya Hen ulo oru ugbo di n'èzí obodo ya nke Omis na ala Croatia.
Ịzụ hens bụ nnukwu ego maka Ante (papa Ivan) na ezinụlọ ya. N'agbanyeghi na a na-akpọ ya "nne okuko", Ivan amachaghị ihe ọ bụla dị ka ọ dị mpako maka azụmahịa nna ya.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Akwụsị Echiche Eziokwu- Ịhụnanya nke ukwu na àjà
N'ịbụ onye na-enyere nne na nna ya aka n'ugbo ọkụkọ, nwa okorobịa Ivan mepụtara talent na football n'oge na-adịghị anya. Ọ na-eji oge ọgbaraiche ya egwu football na agụụ ya maka egwuregwu ahụ ka ọ debanyere ndị otu mpaghara, Hajduk Split onye nyere ya ohere iji gosipụta talent ya.
Mgbalị Ivan na-achọ ọrụ ya dị oke njọ na ọkwa ọzọ dị na nsogbu nwere ego maka ezinụlọ Perisic. Ndị mụrụ ya enweghị ike ị nweta ego agụmakwụkwọ ya. Ọ dị mkpa ka ndị ego bịa akwa uwa n'ihi na nna ya nke ji ire na-ere ihe ọkụkụ ọkụkọ ya iji lekọta ọrụ nwa ya.
Nna Ivan, Ante Perisic bụ nwoke na-ekwere na ego maka nwa ya ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịhapụ akụ ọ bụla o nwere. Ante na-ere ngwá ọrụ ọkụkọ ya iji zụlite ego iji zipụ nwa ya ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kasị mma na Croatia.
N'ịchọ iji mee ka ezinụlọ ya na-agba ọsọ, Ante nwere ịzụ ngwá ọrụ ugbo n'egwurugwu nke mesịrị mee ka ọ nọrọ ná nsogbu (A kọwara n'okpuru ebe a na Ivan Perisic Family Facts). Antie Perisic nọ n'ebe ahụ maka nwa ya n'ụzọ ọ bụla.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Akwụsị Echiche Eziokwu- Ịchụ aja n'àjà na ịmalite ịkpọ aha
Ka o sina dị, ọ bụ azụmahịa anụ ọkụkọ ezinụlọ nke setịpụrụ usoro maka ọrụ Ivan n'oge na-adịghị anya. Ivan nọrọ afọ isii siri ike na Hajduk, na-egwu bọl na ịga ụlọ akwụkwọ. N'agbanyeghị na ọ na-esiri ya ike ịzụta ihe ndị ọ na-azụ anụ ọkụkọ, nna nna Iv nke ọhụụ kpebiri iwepụ ego ọzọ. N'oge a, a na-eji ego eji ego eziga nwa ya nwoke na France ka o wee nwee ohere karịa ọrụ ya. Dị ka n'oge a, a kpọrọ Ivan maka ule site n'aka Sochaux, ụlọ French nke Jean-Pierre Peugeot, bụ onye a ma ama na ezinụlọ Peugeot, malitere.
Nye nwata Ivan, isi ihe mere ị ga-eji gaa France na-achọ ịnweta ohere na ọrụ ya bụ ịnọpụ onwe ya ma bulie ego iji kwụọ ụgwọ nnukwu nna ya.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọtụtụ n'ime ego ndị a na-agbanye n'ime ya Sochaux. Nke a mere na oge 2006 / 2007. N'ịbụ onye obi ụtọ maka ya, Ivan gbaghaara ozugbo ọ na-egwu egwuregwu mbụ ya maka ụlọ ọrụ ahụ. N'oge okpomọkụ ahụ, na 2006, akwụkwọ akụkọ French malitere ide banyere a nwa na-agba ume Foto dị n'okpuru onye na-enwe mmasị ịmasị ìgwè mmadụ ahụ.
Ivan ama ọfọn ama anam enye ọwọrọ aka Belgium ke ebiet emi enye ọkọdọhọ ke enye ọyọsọsọsọsọ. Ivan malitere site na mgbazinye ego na Roeselare tupu ya akwaga na Club Brugge ebe o mesịrị mee aha maka onwe ya. N'etiti ndị Belgium, Ivan ghọrọ Belgian Pro Njikọ elu akara nchịkwa na onye Belgium kacha mma nke afọ maka 2011.
Nke a na-eme ka ọ gaa Borussia Dortmund ebe o meriri 2011-12 Bundesliga. N'oge a, a ka amaghi ya nwa na-agba isi, ma ọ bụ ndị na-agba ụkwụ na ndị na-egbu egbu na nku na n'ihu ihe mgbaru ọsọ. Njem ya na VfL Wolfsburg na Inter Milan na-esote na ndị ọzọ, dị ka ha ga-asị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Na onye ọ bụla na-eto eto Croatian na-eto eto, e nwere ezigbo egwu, enyi nwanyị na nwunye. Ivan Perisic hụrụ obi nwata ya, Josipa na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. N'oge ahụ, ndị hụrụ ya n'anya abụọ bụ ụmụ klas ha ndị klas n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ na klaasị.
Ha abụọ malitere mmekọrịta ha dịka ndị enyi kachasị mma, emesịa tinye aka na ibe ha. Ivan na Josipa lụrụ na 2012 n'oge ya na Borussia Dortmund. Ha abụrụla di na nwunye nwere obi ụtọ kemgbe ha lụrụ.
Di na nwunye abua nwere nwa nwanyi aha ya bu Manuela na nwa nwoke, Leonardo onye di afo ato karia nwanne ya nwanyi. A mụrụ Leonardo Perisic na Wolfsburg ma gwa ya ka ya na nna ya nwee nkwusi siri ike nke kwenyere na nwa ya nwoke ga-abụ ụmụ ama ụkwụ dị ka ya n'otu ụbọchị. Oge a, na-enweghị nsogbu ego ọ bụla dị ka ya na ezinụlọ ya.
Ivan Perisic raara onwe ya nye ezinụlọ ya. Gị onwe ya adịghị amasị mgbasa ozi dị ukwuu, Ivan weere foto ya na ezinụlọ ya ozugbo n'ihu ọmarịcha panorama nke ọdọ mmiri Lugano dị na Switzerland.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ihe Ezinụlọ
Monies Ivan Perisic mere na football bụ ihe bara uru nye ezinụlọ ya. Ọ na-elekọta nne ya, nwanne ya nwanyị ma na-akwụ ụgwọ nna ya si n'ọrụ ugbo ndị ọ zụtara na mbinye ego iji mee ka ezinụlọ ya dị ndụ.
Dịka otu akwụkwọ si kwuo, a naghị akwụ ụgwọ ọrụ ugbo nke Antie zụtara na mbinye ego na oge, nke a dugakwara agha iwu nke mere ka ezinụlọ Perisic nwee ụjọ. Ụjọ ha mechara kwụsị mgbe Ivan kwụrụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ezigbo Ọrụ
Ivan Perisic dara otu mgbe Jurgen Klopp na Dortmund n'ihi enweghi egwu oge. Klopp Foto dị n'okpuru ebe a nọgidere na-ada ogbi na Perisic ma na-akpọ ya "nwata"N'ihi akparama agwa ya .Ideghị, Ivan Perisic enweghị mmasị ịnọdụ na bench. Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ banyere nke a, o kwuru;…
"Mgbe m na-anọdụ ala n'elu bench, m na-anwụ," Ọ bụghị igwu egwuregwu na-eche dịka ntaramahụhụ maka m. M ga-amụta otú ị ga-esi bụrụ ọkachamara banyere ya ụzọ siri ike. M ga-etolite n'uche "
Ivan Perisic abụghị ezigbo ndị ahịa Juventus. Mgbe ọ na-ewe iwe, o jidere onye iro ya site n'olu na agba dị ka a hụrụ na ikpe Juan Cuadrado na Alvaro Morata.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Ivan Perisic Childhood akụkọ na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.